Safaaradda Turkiga ee Itoobiya ayaa u guurtay Kenya sababo la xiriira hanjabaad ka dhalatay iibka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn – Rasaasa News
Jan 18, 2022 Eritrea, ethiopia, TPLF, turky
Shabakadda wararka ee T24 ayaa sheegtay in safaaradda Turkiga ee ku taalla caasimadda Itoobiya ee Addis Ababa loo raray dalka dariska la ah ee Kenya, kaddib hanjabaado loo soo jeediyay dawladda Turkiga oo taliska Abiy Axmed siisay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Turkiga si ay u xakameeyaan fallaagada Tigrayga, sida uu ku warantay shabakadda wararka ee T24.
Inkasta oo dawladda Turkiga aysan si rasmi ah uga hadlin iibinta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dawladda Itoobiya, haddana Ra’iisul wasaare Abiy Axmed ayaa booqasho ku tagay dalkaas oo uu laba jeer la kulmay madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan lixdii bilood ee la soo dhaafay, isaga oo intaas ku daray. Aaminsanaanta baahsan ee ah in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee laga soo iibiyay Turkiga, marka lagu daro Iran iyo Imaaraadka Carabta, ay wax ka beddeleen dagaalka sokeeye ee Itoobiya, saxafi Barçın Yinanç ayaa maqaal ku qoray mareegaha wararka ee T24 Isniintii.
“Safaaradda Turkiga ee Addis Ababa kama shaqayn karto caasimadda sababo la xidhiidha hanjabaado soo gaadhay. Safiirka iyo shaqaale badan oo safaaradeed ayaa loo wareejiyay Kenya [dariska] ah. Ma jiro wax war ah oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga oo arrintan ku saabsan,” ayuu yiri weriyaha.
Iskahorimaadka oo muddo sannad ka badan ka socday dalka Itoobiya, oo ah dalka labaad ee ugu dadka badan Afrika, isla markaana gacan ka geysanaya ammaanka gobolka, ayaa sababay dhimashada kumannaan qof, in ka badan 2 milyan oo qofna ay ka barakaceen guryahooda, isla markaana qaybo ka mid ah dalka ku riixay macaluul.
Xoogagga Abiy Axmed, millatariga Itoobiya, maleeshiyaad qawmiyadeed iyo ciidamo ka socda dalka ay dariska yihiin ee Eritrea, ayaa u dagaallamaya sidii ay kooxda Tigray People’s Liberation Front, ama T.P.L.F., looga saari lahaa magaalada ay ku xooggan tahay ee gobolka Waqooyi ee Tigray.
Horaantii Noofambar, dawladdu waxay kacday markii dagaalyahano ka socda Tigray-gu ay koonfurta u soo galeen Addis Ababa, taas oo ku khasabtay ra’iisul wasaaraha inuu ku dhawaaqo xaalad degdeg ah. Ajaanibtii dalka ka qaxay ayaa dawladu xidhay kumanaan shacab ah oo kasoo jeeda qoomiyada Tigrayga.
Hase yeeshee toddobaadyo ka dib Abiy waxa uu ka noqday rogaal celin milatari oo yaab leh, isaga oo hakiyay socodkii fallaagada oo wax ka yar 100 mayl u jirta caasimadda, ka dibna ku khasbay in ay dib ugu gurtaan boqollaal mayl oo ay u jiheeyaan buuralayda Tigray.
Waxa uu qayb ahaan ku guulaystay in uu abaabulo muwaadiniinta caadiga ah si ay hubka u qaataan si ay uga hortagaan horusocodka Tigrayga. Si kastaba ha ahaatee, waxaa hantidiisa si weyn kor ugu qaaday diyaarado hubaysan oo aan duuliye lahayn, kuwaas oo dhawaan laga keenay Imaaraatka Carabta, Turkiga iyo Iran, kuwaas oo dhabar jabiyay ciidamada Tigreega, sida lagu sheegay warbixin uu qoray wargeyska New York Times todobaadkii hore.
Diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Drones-ku waxay sidoo kale duqeeyeen xeryaha qaxoontiga ee Tigray waxayna dileen tobanaan qof oo rayid ah, wargeyska Times ayaa yidhi, isagoo intaa ku daray in inkasta oo Abiy uu dhawaan sii daayay maxaabiis siyaasadeed, taas oo keentay inuu taleefoon kula hadlo madaxweynaha Maraykanka Joe Biden, rajada xabbad joojinta ayaa u muuqatay mid fog.
Dawlada Turkiga ayaa ka abuuratay bariga Afrika cadaawad xoog leh oo wax wayn u dhimi doonta danaha uu dalka Tukigu ka leeyahay bariga Afrika.